How much is a plane ticket to Zimbabwe from South Africa? - African stories
Is South African Airways flying to Zimbabwe?
Mozambique 1832.63 2.01
South African Airways offers the convenience of direct flights to Harare. … The most populous city in Zimbabwe, Harare boasts a fair amount of beautiful buildings, galleries, public parks and museums.
The cheapest way to get from Zimbabwe to South Africa is to bus which costs $30 – $55 and takes 20h.